I-AMERICA | RayHaber | raillynews
Uloliwe ohamba ngemoto othuthwe ngebhasi e-7 eMexico, abangama-32 benzakala
Kwilizwe laseSonora emantla ntshona eMexico, abantu abasi-7 babulawa kwaye abangama-32 benzakala xa uloliwe ohamba ngemoto wafika ngebhasi ethwele abasebenzi baseMexico Red Red. Inqanaba lokuwela kwiSonora State kumantla ntshona eMexico [More ...]
IZiko elitsha lezinto eziNtsha leZinto ezisuka kwi-DHL
I-DHL ivule iziko lesithathu eChicago kunye neZiko laseMelika laseMelika ukuphuhlisa izisombululo ezintsha zokuphuculwa kwemisebenzi kunye nokuhanjiswa kwempahla. Vakalisa ukuzimisela kwayo kutyalo-mali kwiitekhnoloji ezintsha ngalo lonke ithuba [More ...]
Uloliwe woLoliwe ohamba noMlambo
Iinqwelo zoololiwe abahamba ngeenqwelo moya e-US ziqengqele ibhulorho ukuya emlanjeni. Uthe akafanga okanye wenzakale. Iinqwelo zoololiwe abahamba ngeenyawo ziye zangqubeka kwibhulorho eHarpers Ferry, eVirginia [More ...]
Kwakutheni ukuze kwakhiwe i-US East-West Railway Railway?
Ulwakhiwo lokuqala lukaloliwe kwilizwekazi lonke luqale e-United States kwi1863 kwaye lugqitywe ngoMeyi 1869. Umbono wokwakha uloliwe waziswa kwiCongress ngu-Asa Whitney e-1845. Ibalulekile into ka-Abraham Lincoln [More ...]
Iitanki ezimbini zeoyile ezivela kwintshona yeRussia zafika e-China ngeentaba zomkhenkce zeArctic. Indlela kunye nokuhambisa ioyile ngumyalezo oya e-United States. Iindlela zamanzi ezilawulwa ngumkhosi wamanzi wase-US ngendlela [More ...]
Imephu yeSao Paulo yeMetro: IMetro yeSan Paulo, eyayigunyazisiwe e1974, inethiwekhi enkulu kaloliwe enomtya we-6 kunye nomgca we-monorail. Ivula kwi-2014 kwimigca [More ...]
I-Hyperloop Training ukuze ivulwe ngo-2040
Izisombululo zohlalutyo lwamashishini kunye nobukrelekrele bokuvelisa umatshini ukulungiselela i-4.0 yokwandisa imveliso kunye neziphumo ezisemgangathweni uHitachi Vantara, umxhasi waseHitachi Ltd [More ...]